ကြယ်ပြာ| January 24, 2013 | Hits:3,039
2 | | ချိုင်းထောက်များကို လေထဲသို့မြှောက်ရမ်း၍ ခြေတဘက်ကိုသာ အားပြုရသဖြင့် ယိုင်ထိုးနေကြသော ခန္ဓာကိုယ်များကို ထိန်းပြီး “အမေစု ကျန်းမာပါစေ”ဟု အော်ဟစ်လိုက်သံများ ညံသွားသည်။
3 Responses	LeaveaReply Cancel reply	Your email address will not be published. Required fields are marked *Comment Name * Email * Website pps၁၂၃၄၅ January 24, 2013 - 4:20 pm	ကချင်ပြည်မှာလည်း စစ် အစိုးရ ထိုးစစ်ကြောင့် သေဆုံး ဒဏ်ရာ ရရှိသူ အများကြီးပါ။ အထူးသဖြင့် ပြည်မကလာတဲ့ လူတစ်စုကြောင့် ဒေသခံတွေ ဘဝပျက်သွားရတာ အများဆုံးပါ။
Reply	မျိုးချစ်သူ January 24, 2013 - 9:58 pm	အဲဒီ ပြည်မ ပြည်မဆိုတဲ့ စကားကို နည်းနည်းလျှော့ပြောစမ်းပါကွာ။ မင်းတို့ ပြောလိုက်ရင် ဒါချည်းပဲ။ မင်းတို့ ကချင်နိုင်ငံတော်က စစ်ကိုင်းတိုင်း အထိတောင် ပါတယ်ဆို။ ပြည်မက လူက အစိုးရကိုးကွ။ အဲဒီတော့ တိုက်နိုင်တဲ့ အင်အားရှိလို့ လာတိုက်တာဟေ့။
Reply	Lailun January 25, 2013 - 7:51 am	Crying? Suu Kyi may listen 25% of the Karen’s voice. Because Suu Kyi has 25% Karen’s blood. The Kachins are crying but Suu Kyi does not hear them or Suu Kyi is pretending not hearing because she has 0% Kachin’s blood. Please stop crying to Suu Kyi. You better cry for your own ethnic and other ethnics because they share your suffering and plight.